जति थो’रै सुतिन्छ: उति छि’टो म’रिन्छ – जनचेतनाको लागी सेयर गरौ ! – Life Nepali
जति थो’रै सुतिन्छ: उति छि’टो म’रिन्छ – जनचेतनाको लागी सेयर गरौ !
बिबिसी। “यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने मीठो निन्द्रामा समय खर्च गर्नुहोस्,” निन्द्रा विशेषज्ञ म्याथ्यु वाकर भन्छन्। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बेकरलेका मनोविज्ञान प्राध्यापक वाकरले थुप्रै अध्ययनमा भाग लिएका लाखौँ मनिसको तथ्याङ्क अध्ययन गरेका छन्। “निन्द्रा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र निःशुल्क उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो,” उनी भन्छन्। पचास वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि अबको विषय ‘निन्द्राले हामीलाई के गर्छ’ भन्ने होइन कि ‘निन्द्राले फाइदा नगर्ने केही छ कि’ भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
निन्द्राले हामीले के गर्छ?
अहिलेसम्म अध्ययनकर्ताहरूले निन्द्राले फाइदा नगर्ने स्थास्थ्यसम्बन्धी कुरा पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको कुरो भनेको निन्द्राको अभावमा हाम्रो शरीर र मस्तिष्कमा नाटकीय असर गर्छ भन्ने हो। विकसित मुलुकमा मानिसहरूको ज्या’न लिइरहेको अलजाइमर्स, क्यान्सर, मृटु र धमनीसम्बन्धी रो’गहरू, मोटोपना, डि’प्रेसन, चि’न्ता र आ’त्महत्याको पनि निन्द्राको अ’भावसँग केही न केही सम्बन्ध पाइएको छ। मानव शरीरको सबै प्रणालीहरूले निदाएको अवस्थामा पु’नर्ताजगी प्राप्त गर्छन्, र निन्द्राको अ’भावमा तिनीहरूमा असर पर्छ।
तर निन्द्रा भने प्राकृतिक हुनुपर्छ, निन्द्राको औ’षधिले भने क्यान्सर, इ’न्फेक्सन र मृ’त्युको सम्भावना बढाउँछ। निन्द्रा हाम्रो लागि ज्यादै राम्रो हुन्छ। तर हामीले विकसित मुलुकको तथ्याङ्क हेर्दा देख्ने प्रचलन भने राम्रो छैन। मानिसहरू औसतमा एक सय वर्षअघिको भन्दा कम सुत्छन्। पर्याप्त निन्द्रा भनेको दिनमा सातदेखि नौ घण्टाको सुताइ हो। पर्याप्य सुत्नु शा’रीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन्, रचनात्मक सिर्जनशीलताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। सात घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसहरूको शरीर र मस्तिष्कमा असर हुन थाल्छ र रोग प्र’तिरोधी क्ष’मतामा अ’सर गर्छ।
निदाउनु भनेको तकियामा टाउको ढल्काउनु होइन्। विश्वका धेरै मानिसहरूलाई निदाउन गार्‍हो हुन्छ। विश्वका धेरै ठाँउमा आजकल अँध्यारो हुँदेन, हामी धेरैजसो अप्राकृतिक उज्यालोमा समय बिताउछौँ र आधुनिक विश्वको गति धेरै छिटो छ। र हामी नपुगेको निन्द्रा पुर्‍याउन खाली समयको सदुपयोग पनि गर्दैनौँ। “गएको समय गयो,” प्रा. वाकर भन्छन्।तर हामी आफैँलाई धेरै र राम्रो निन्द्राका लागि प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ। वैज्ञानिकहरु भन्छन् हामीले आफ्नो बानी परिवर्तन गर्‍यौँ भने राम्रो नतिजा तुरुन्तै देखिन्छ। ‘
१ ओछ्यान सुत्नका लागि मात्रै :-
सुत्न र अन्य सीमित क्रियाकलापका लागि मात्र ओछ्यानमा जा’नुहोस्। खाना खान, पढ्न वा खेल्न होइन। हाम्रो मस्तिष्कले छिट्टै दुई वस्तुबीच सम्बन्ध स्था’पित गर्छ। त्यसैले हामीले ‘ओ’छ्यान सुत्नका लागि हो’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। यदि ओछ्यानमा २० मिनेटसम्म निदाउन सकिएन भने उठेर केही बेर हिँड्ने, पढ्ने वा अरू केही काम गरेर अ’लमलिनुपर्छ। त्यसो गर्दा फेरि सुत्न सजिलो हुन सक्छ।
२ सुत्ने र उठ्ने समय नियमित बनाउनुहोस्था :- ल्न सजिलो छ: सधैँ एउटै समयमा सुत्न जानुहोस् र उठ्ने समय पनि नियमित होस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जागा रहने समय निश्चित राख्नु हो। यसले गर्दा शरीरले सुत्ने समयमा निद्रा पार्न सहयोग गर्छ।
३ अँध्यारोमा बस्नुहोस्”
निद्राका लागि आवश्यक म’हत्त्वपूर्ण हार्मोनका लागि शरीरले अँ’ध्यारो खोज्छ। विकासको एउटा न’राम्रो पक्ष भनेको हा’मी निरन्तर उज्यालोमा हुन्छौँ। सुत्नुअघि कोठाको उज्यालो कम गरेर हामी अँध्यारो ब’नाउन सक्छौँ। यसको अर्थ मोबाइल वा टीभी वा कम्प्युटरको स्क्रीनबाट पर रहनु पनि हो। स्क्रीनले ‘नीलो प्रकाश’ नि’काल्छ जसले निद्राको हार्मोन मेलटोनिनको प्रभावलाई निस्तेज पारिदिन्छ। त्यसैले सुत्नुभन्दा एक घण्टा पहिल्यै नीलो प्रकाशका स्रोतहरू बन्द हुनुपर्छ।
Previous हृ’दयघा’तबाट जोगिने यी हुन् पाँच प्रभावकारी उपाय-बिधि !
Next कोरोना भा’इरसका सं’क्रमित र स’म्भावित बि’रामीलाई उपचार गर्ने जि’म्मा अब नेपाली सेनालाई